HP က LAPTOP တစ်လုံးပေါ်တွင် BIOS ကို UPDATE လုပ်ဖို့ကဘယ်လို - BIOS ကို - 2019
အဓိက BIOS ကို
ကျနော်တို့ HP က Laptop တစ်လုံးပေါ်တွင် BIOS ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
Windows Explorer ကိုတစ်ဦး graphical interface တစ်ခု၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမှတဆင့်ဖိုင်များကိုသင် access ကိုပေးသည်။ ဒါဟာလုံခြုံစွာလည်ပတ်မှုစနစ်၏အဓိကအမြင်အာရုံ shell ကိုခေါ်တော်မူနိုင်ပါသည်။ တခါတရံမှာအသုံးပြုသူများ application ကိုတုံ့ပြန်ရပ်သို့မဟုတ်မစတင်ထားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြသည်။ ဤအခြေအနေဖြစ်ပေါ်သောအခါ, ဖြေရှင်းရေးအတော်ကြာအခြေခံနည်းလမ်းများရှိပါသည်။
Windows 10 ကိုအတွက်ချွတ် Explorer ကိုနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်
အများစုကတော့ကစပယ်ယာတုံ့ပြန်ရပ်သို့မဟုတ် start မည်မဟုတ်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒါဟာဥပမာအချက်များအမျိုးမျိုး, software များဆုံးရှုံးမှုဒါမှမဟုတ်စနစ်၏ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏အလုပ်ကိုပြီးစီးလျှင် app ကိုမစတင်မီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာရှိသမျှစစ်ဆင်ရေးကို run သငျ့သညျ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ထို utility ကိုဖွင့်လှစ် "Run ကို"သော့ကိုပေါင်းစပ်ချကိုင်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဦးဝင်း + R ကို, ထိုလယ်၌ Enterစူးစမ်းသူနှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
Method ကို 1: ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ
ပထမဦးဆုံးအရပျ၌အကြှနျုပျတို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဖိုင်တွေအဘို့သင့်ကွန်ပျူတာစကင်ဖတ်ဖို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏလည်းမရှိသောအင်တာနက်ကဖေးတွေမှာအထူးဆော့ဖ်ဝဲ, မှတစ်ဆင့်ထုတ်ယူသွားတတ်၏။ ဒီဘာသာရပ်အပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့ကအခြားပစ္စည်းများမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဖယ်ရှားရေးပြီးစီးပြီးနောက်သူတို့သည်သင်၏ PC ကို restart ချလိုက်ပါနဲ့အခြို့သောခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဖယ်ရှားပစ်ရ startup မှာစကင်ကိုပြန်လုပ်ပါရန်မမေ့မလြော့ပါတွေ့ရှိလျှင်။
Method ကို 2: Registry ကိုဖိနပ်
registry ကိုအတွက်အမှိုက်သရိုက်များနှင့်ယာယီဖိုင်တွေအပြင်ကိုမကြာခဏပေါ် လာ. , ထိုစနစ်အမှား၏အသွင်အပြင်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏အလုံးစုံကိုလျှော့ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအမှားများ windose ။ ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံသင်ကသန့်ရှင်းရေးနှင့်မည်သည့်အဆင်ပြေနည်းလမ်းအားဖြင့်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါတန်းစီဇယား၏သန့်ရှင်းရေးများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုမှတစ်ဦးကအသေးစိတ်လမ်းညွှန်အောက်ပါလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ပါ။
အမှားများမှအမှာ Window Registry ကိုရှင်းလင်းနည်း
CCleaner ကိုသုံးပြီး registry ကိုပျော်စေ
Method ကို 3: PC ကို Optimization
သငျသညျ Explorer ကိုအချိန်ပေါ်တုံ့ပြန်ရပ်မသာကြောင်းသတိပြုမိပေမယ့်လည်းတစ်ခုလုံးကိုစနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချလြှငျ, စောင့်ရှောက်မှုအချို့အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလျှော့ချပါကပိုကောင်းအောင်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကအစိတ်အပိုင်းများ၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ကူညီပေးပါမည်, မြေမှုန့်ထဲကနေစနစ်ယူနစ်ရှင်းလင်းဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ အောက်တွင်သင်တို့သည်ဤစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆောင်းပါးစာရင်းကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Processor ကို performance ကိုတိုးမြှင့်
Method ကို 4: မှားယွင်းနေသည်ဆုံးမခြင်း
တစ်ခါတစ်ရံ Operating စနစ် Explorer ထဲမှာအပါအဝင်အချို့ applications များအတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုအမှားများကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရောဂါနှင့်ဆုံးမပဲ့ပြင် built-in သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေနေသည်။ သီးခြားဆောင်းပါးအတွက်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းပြဿနာများအပေါ်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှုထွက်စစ်ဆေးပါ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: အမှားအယွင်းများအတွက် Windows 10 ကိုစစ်ဆေးခြင်း
Method ကို 5: updates များကိုနှငျ့အလုပျလုပျ
ငါတို့သည် Windows 10 ကိုမကြာခဏအလုံအလောက်ထုတ်လုပ်တီထွင်မှုကိုသိသည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးသွင်းယူနောက်ခံ, ဒါပေမယ့်အမြဲ, ဤလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ကြသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့ကဤခြေလှမ်းများအကြံပြု:
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Start" နှင့်ကိုသွား "Options ကို"gear icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း Locate နှင့်ဖွင့်လှစ် "အပ်ဒိတ်လုပ်နေသည်နှင့်လုံခြုံရေး".
installed ကြသည်မဟုတ်အဘယ်သူမျှမ updates များကိုရှိပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သူတို့လက်ရှိရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သူတို့ရဲ့ installation ကိုလိုက်နာပါ။
အသစ်သောဖိုင်များကိုမှားယွင်းစွာထားကြသောအခါအမှု၌, သူတို့က operating system ကိုအတွက်မအောင်မြင်မှုများကိုနှိုးဆော်ခြင်းလိမ့်မည်။ ထိုအခါသူတို့ကဖယ်ရှား-install ရပါမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ link ကို click နှိပ်ပြီး "View installed updates များကိုမဂ္ဂဇင်း".
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Uninstall ကို updates များကို".
နောက်ဆုံးပေါ်အစိတ်အပိုင်းများကိုရှာပါ, သူတို့ကို uninstall, ပြီးတော့ reinstall ။
10 windose နှင့်ဆက်စပ်သောအပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်များကိုသငျသညျအောက်ကလင့်ခ်ပေါ်တွင် updates များကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကို Windows 10 ကနေအဆင့်မြှင့်
လက်ဖြင့် Windows 10 ကိုများအတွက် updates များကို Install
Windows 10 ကိုအဘို့ကို install updates များကိုအတူပြဿနာများ troubleshoot
Method ကို 6: ကိုယ်တိုင်မှန်ကန်သော
ဤအမှုနည်းလမ်းများမဆိုရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ဘူးဆိုရငျ, သငျသညျကို manually Explorer ကိုရပ်တန့်များ၏အကြောင်းရင်းရှာက fix ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤအမှုကိုပြုသောသည်:
မီနူး "Start" သွားပါ "Options ကို".
ဤတွင်ရှာဖွေရေးဘားတွေ့ရှိမှုလျှောက်လွှာအတွက် "အုပ်ချုပ်ရေး" ထိုသို့ run ။
ဒီ tool ကိုဖွင့် 'အစီအစဉ် Viewer ကို ".
directory ကိုတစျဆငျ့ "မှတ်တမ်းများကို Windows » , ချဲ့ထွင် "စနစ်" သင်တို့ရှိသမျှဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူစားပွဲတစ်ခုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Explorer ကိုရပ်တန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်ကွောငျးတစျခုဖွင့်ပါနှင့်ထို program ၏ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်ပါကရပ်တန့်စေသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုနေရာချထား။
ချွတ်ယွင်းများ၏အကြောင်းရင်းတတိယပါတီ software ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ပြီဆိုရင်, အကောင်းဆုံးမျှအဆင်ပြေနည်းလမ်းဖြင့်၎င်း၏ဖယ်ရှားရေးဖြစ်လိမ့်မည်။
အထက်, သင် system ကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူလျှောက်လွှာ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ခြောက်လအမှားဆုံးမပဲ့ပြင်ရွေးချယ်စရာမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သင်ဤခေါင်းစဉ်အပေါ်မေးခွန်းများရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုမေးမြန်းဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။
Laptop ကို Wi-Fi ကိုမမြင်ရပါဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာကို
Avast အွန်လိုင်းလုံခြုံရေး 10,0
ရေနွေးငွေ့အပေါ်မိုဘိုင်း Authenticator ကို Disable
ကွန်ယက် setting များကို Windows 10 ကို reset လုပ်နည်း
Windows 10 ကိုရုရှားဇာတ်ကောင်ပြသနှင့်အတူဆုံးပြဿနာများ
Apple က ID ကို
သင့် browser ရှင်းလင်းရေး - သင်က Mozilla Firefox browser ကို၏လုပျငနျး, ဖြေရှင်းချက်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အများဆုံးတတ်နိုင်လမ်းနှင့်အတူပြဿနာများရှိပါက။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော် Mozilla Firefox ကို web browser ကိုတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောသန့်စင်ဖျော်ဖြေဖို့ဘယ်လောက်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် browser ကို muff ရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ဥပမာ, တစ်ဦးရိုက်နှက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်လျှင်, ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏ရှုပ်ထွေးသောထွက်သယ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Outlook နဲ့အတွင်းဂျီမေးလ်ကို set up
လူ့ VKontakte စာရင်းသွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
https://termotools.com my.termotools.com © BIOS ကို 2019